ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေအားလျှပ်စစ် Three Gorge Dam | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေအားလျှပ်စစ် Three Gorge Dam
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေအားလျှပ်စစ် Three Gorge Dam
Posted by weiwei on Dec 30, 2010 in Photography, Travel |7comments
ရန်စီမြစ်ကြောင်းခရီးသွားတုန်းက ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ ရေကာတာရှိတဲ့နေရာကို ၀င်ရောက်လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ၀င်ရောက်လေ့လာတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး … အဝေးကနေ လှမ်းကြည့်ရုံပါပဲ။ အဲဒီမြင်ကွင်းကို မြင်နိုင်တဲ့ နေရာ ၃ နေရာကနေလှည့်ပတ်ပြီး ပြပါတယ်။ အဲဒီနေ့က မိုးအုံ့နေလို့ ဓါတ်ပုံတွေက သိပ်မသဲကွဲဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ လ လောက်ကမှ ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေပါ။ အဲဒီစီမံကိန်းကို ၁၉၉၂ ကနေ စတင်ပြီး အဆင့် ၃ ဆင့်ခွဲပြီး တည်ဆောက်ခဲ့တာ ၂၀၀၉ မှာမှ အပြီးသတ် ပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဟူးပေပြည်နယ်၊ ရီချန်မြို့နယ်အတွင်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ ရီချန်မြို့ပေါ်ကနေ အဲဒီကို ၂ နာရီခန့်ကားစီးပြီးသွားရပါတယ်။ လမ်းခရီးက တောင်တွေက အရမ်းလှပါတယ်။ မိုးရွာနေလို့ လျှပ်တစ်ပြတ်ဓါတ်ပုံတွေတော့ မရိုက်ခဲ့ရဘူး။
Three Gorges Dam Project is composed of the dam, the hydropower stations and the navigation facility. It measures 607 feet tall and the top is 3,319 yards wide. It has taken 17 years to finish the construction of the whole project, which started in 1992 and includes three stages. The first stage took five years from 1992 to 1997. During this period, the cofferdam construction and the excavation ofadiversion channel in the first stage were finished. Meanwhile,atemporary ship lock on the left bank of the river and some preparation work was also completed. The second stage lasted six years from 1998 to 2003, when the cofferdam construction was in its second stage and was undertaken at the same time as the construction of the permanent ship lock and the navigation buildings. The power station facilities construction and the installation of machinery on the left bank were also completed. The third stage of the project began in 2003 and has been completed in 2009. During this period, the installation of all machinery, the construction of the power station and the dam on the right bank are finished. Now,a3,861 square miles canyon-reservoir dam is presented to the world.
Power Generation, Three Gorges Dam Project
The total capacity of the Three Gorges Dam Project is 18.2 million kilowatts and the annual power generation is 84.7 billion kilowatt hours, which greatly relieves the electricity pressure in middle and eastern China. Located in the middle of China, the Three Gorges hydropower station supplies power to the middle, eastern and southern China, that within 400 to 1,000 km economic transmission distance of the load. The big power supply system associated by middle, eastern and southern China is formed, which creates multiplier effect between different regions, regulating effect between hydropower stations and capacity conversion effect between hydropower stations and steam power plants.
Hydropower is clean energy and environmental friendly. The operation of the Three Gorges hydropower station can reduce the emissions of ten million tons of carbon dioxide, one to two million tons of sulfur dioxide, 300,000 to 400,000 tons of oxynitride, 10,000 tons of carbon monoxide and 150,000 tons of dust. From these data, the huge contribution of the Three Gorges hydropower station to the environmental protection is definitely affirmed.
တရုတ်က ဒီလောက် လုပ်တာတောင် လျှပ်စစ်က လိုနေသေးတယ်လား။
ရွာထဲမှာ မီးမှန်မှန် လာရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲ။
အဲ လောက် လျှပ် စစ် တွေ ရ နေ တာ တောင် မြန် မာ ပြည် က ဟာ ကို လို ချင် နေ သေး တယ် ။
တရုတ်တွေက မီးတွေအရမ်းသုံးတယ် … မြို့တစ်မြို့မှာ ညဘက်ထွန်းတဲ့မီးအားက မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးစာလောက် ရှိမယ်ထင်တယ် …
မီးမပျက်ဘူး .. မီတာခက တစ်ယူနစ်ကို ဗမာငွေ ၁၀၀ ကျပ်လောက်ကျတယ် … ဘယ်လောက်ပဲ လျှပ်စစ်ထုတ်ထုတ် လောက်မှာ မဟုတ်ဘူး …
တရုတ်တွေ ညူကလီးယားက လျှပ်စစ်ထုတ်သလား..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..ရေအားကထုတ်ကြတာကိုတော့ … လေးစားမိတာပါပဲ..။
မြန်မာပြည်မှာ လာလုပ်မှာကိုလည်း .. ကြိုက်မိပါတယ်။
သေသေချာချာ ဆာဗေးတော့ လုပ်စေချင်တာပေါ့..။
နယ်ခံ ဒေသခံတွေဆီက ထောက်ခံချက်လည်းပါစေချင်တာပါ။
ယခုနှစ် ၂၀၁၁က ယုန်နှစ်လို့ဆိုပါတယ်။ အန်တီဝေသိရင် ယုန်နှစ်ရဲ့ လက္ခဏာနဲ့ ထူးခြားချက်လေးတွေကို ပါးစပ်သတင်းအရပ်စကားမျိုးနဲ့ သိသလောက်ပြောပါအုံး။ စာလိုကတော့ ဂူဂဲလ်ကို မေးရင်ရပါတယ်။